अपडेट : मतगणना सकियो, केशव र बालेनको मतान्तर कति ? - jagritikhabar.com
अपडेट : मतगणना सकियो, केशव र बालेनको मतान्तर कति ?
महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये ८ वटा वडाको मतगणना सकिएको छ। वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, २८, ३०, र ३२ वडाको मतगणना सकिदाँ मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता फराकिलो पारेका छन्।
सुरूदेखिनै अग्रता लिएका शाहले मतगणनाको पछिल्लो विवरण अनुसार २८,८८२ मत पाएर अग्रता कायमै राखेका हुन्। उनलाई राप्रपासँग गठबन्धन गरेको नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले पछ्याइरहेका छन्। स्थापितले हालसम्म १५ हजार ३ सय १३ मत पाएका छन्। उनी शाहभन्दा १३ हजार ५७० मतले पछि छन्।
तेस्रो स्थानमा रहेकी सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले १४७९८ मत पाएकी छन्। उनी दोस्रो स्थानका स्थापित भन्दा ५१४ मतले पछि हुँदा शीर्ष स्थानमा रहेका शाहभन्दा १४ हजार ८४ मतले पछि छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको १,२, ३, ४, ५ वडामा नेकपा एमालेका वडाध्यक्षले जित हात पारेका छन्। यद्यपी यी वडामा मेयर पदमा एमालेका उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा निकै छन्।
यस्तै २८ र ३० वडामा नेपाली कांग्रेसले वडाध्यक्ष जित्दा पनि यी वडाबाट मेयरमा कांग्रेस उम्मेदवारले अन्य उम्मेदवारको तुलनामा थोरै मात्र मत पाए। यस्तै वडानम्बर ३२ मा नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा मेयर पदमा एमालेका उम्मेदवारले दोस्रो बढी मत पाए।
मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा घलान र उपाध्यक्षमा तिमिल्सिना विजयी
मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार सर्केश घलान सात हजार ३८४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको मुख्य निर्वाचन कार्यालय मकवानपुर हेटाँैडाले जनाएको छ ।
उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार खेम जर्गा मगरले छ हजार १६६ मत प्राप्त गर्नुभएको बताइएको छ । त्यस्तै सो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार फणीन्द्र तिमिल्सिनाले सात हजार ९३५ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
मतगणना हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी धनमाया स्याङ्तानले चार हजार ६६९ मत ल्याउनुभएको हो । यसअघि धनमाया २०७४ सालको निर्वाचनमा उक्त पार्टीका तर्फबाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको थियो ।